Atakalon’ny Tanora Peroviana Hareza sy Hety Ny Fitaovampiadiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Aogositra 2017 4:58 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, English, Italiano, Deutsch, srpski, 繁體中文, Ελληνικά, Español
Sary an'i Fadi El Benni, nozarain'ny Al Jazeera amin'ny teny Anglisy tao amin'ny Flickr, nampiasàna ny lisansa Creative Commons CC BY-SA 2.0.
Tsy dia nisy niraharaha loatra ny endrika ivelany sy ny fikarakarana vatana tany aloha tany. Ao anatin'ity tranga ity izy ireny, manampy ireo tanora ao Però hanalavitra ny fanaovana heloka sy hampiroborobo ny asa ara-drariny , toy ny mpanety.
El Callao – ilay seranantsambo fototra ao Però, any amorontsiraky ny Ranomasimbe Pasifika ary tsy lavitra ny Afovoan-tanàna Manantantaran'i Lima, renivohitra Peroviana – dia faritra iray manana ny taha avo be amin'ny resaka heloka bevava, toerana ahitàna be tokoa ny fanendahana an-dalambe sy varotra an-tsokosoko zavamahadomelina. Navoakan'ny fanadihadiana iray natao tamin'ny Aprily 2017 fa 51.5% amin'ireo mponina ao an-toerana no tsy mahatsiaro ho tsara antoka / mandry fahalemana.
Mandritra izany fotoana izany, Però − tsy misy hafa amin'ireo firenena hafa ao Amerika Atsimo sy Afovoany − dia niaina fitomboan'ny tinady amin'ny endrika amam-bika ho an'ny lehilahy. Nitarika ireo olontsotra hitady matetika kokoa ny tànana manampahaizan'ireo mpanety afaka mamoaka ireny taovolo tsara voatra ireny ny fironana maka tàhaka ny endrika ivelan'ireo kintan'ny fanatanjahantena manana taovolo tsy mitovy amin'ny rehetra, toa an'i Paolo Guerrero (Però), Arturo Vidal (Shily), Pedro Gallese (Però), na Neymar mihitsy (Brezila).
Nitondra mihitsy aingam-panahy hanao hetsika isantaona ilay tinady amin'ny resaka endrika amam-bika tsy mbola nisy toa azy izay manosika hanitatra ny fetra amin'ny lafiny nofinofy sy hamorona fahaizamanao, ny “The Battle of Barbers (Ny Adin'ireo Mpanety),” izay nisy nanomboka tamin'ny 2014. Amin'io hetsika io, mifaninana ireo manampahaizana mba haneho hoe iza no hahatafavoaka endrika hafahafa miavaka indrindra, izay azonareo jerena ao anatin'ity lahatsary manaraka ity (betsaka ny lahatsary tamin'ireo andiany tato ho ato amin'io fifaninanana io no azo jerena ao amin'ny pejy Facebook natao ho an'ny daholobe Battle of Barbers):
Tamin'izany no nahitàn'ireo toeram-panabeazana, toy ny sekoly Augusto Salazar Bondy ao El Callao, hevitra hanararaotra handresy lahatra ny tanora hanakalo ny fitaovampiadiana ho lasa fitaovana fikolokoloana volo, sy hanaraka fiofanana fa tsy ireo torohevitra ratsy ; hiasa, noho ireo varavarana hisokatra ho azy ireo raha vao mahay ny taokanton'ny asa fanetezana izy ireo.
Voaentan'ity asa ity sy ny mety ho azo atao avy aminy, ampolony ireo tanora nahita hoe afaka ny hanomboka hiasa aminà asa iray izay tena malaza tokoa ankehitriny.
Nanambara fisianà atrikasa fanofànana ara-teknika ilay sekoly, mialohan'ny fanombohan'ny taompianarana amin'ny Martsa, sady koa nitatitra vitsivitsy amin'ireo zavabitany :
Tamin'ny 1995, izahay no hany sekoly teknika tokana teto anatin'ny vondrom-piarahamonina, ary teto anatin'ny distrika mihitsy aza, zavamisy iray izay mampirehareha anay fatratra, ankoatry ny fitiavanay ny zanatsika, dia nanorina vondrom-piarahamonina ara-panabeazana izahay.